Nomena andro manokana izy ireo - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Vehivavy Afrikanina tatsimo
Nomena andro manokana izy ireo
Nankalazaina ny 9 aogositra lasa teo ny andron’ny vehivavy afrikanina tatsimo. Notanterahina tao amin’ny hotely Carlton Anosy izany.
« Miarahaba ny vehivavy afrikanina tatsimo rehetra mankalaza ny andron’ny vehivavy afrikanina tatsimo maneran-tany. » hoy Rtoa Naharimamy Lucien Irma minisitry ny mponina eto Madagasikara. Nomena andro manokana ny vehivavy.
Tonga marobe tokoa ireo vehivavy niara-nankalaza io andro manokana hoan’ny vehivavy afrikanina tatsimo io. Hita tao avokoa na minisitra na tompon’andraikitra isan-karazany eto amin’ny Firenena. Teo ihany koa ireo mpandraharaha, indrindra fa ny vehivavy.
Maro ireo zavatra iaraha-miasa sy firalahiana eo amin’ny Firenena malagasy sy ny Firenena afrikanina tatsimo. Vehivavy rahateo no ambasadaoron’ny firenena eto amintsika hoy ny minisitry ny mponina malagasy, izay manome tombondahiny ny fampandrosoana ireo vehivavy. « Izao no porofo mitohoka amin’ny tenda miara-mankalaza ny andron’ny vehivavy afrikanina tatsimo izao »: hoy Rtoa Naharimamy Lucien Irma minisitry ny mponina eto Madagasikara. Betsaka ireo sedra eo amin’ny vehivavy raha tsy hiresaka afa-tsy ny resaka fanolanana, tsy vitan’ny hoe fanolanana fotsiny efa betsaka ihany koa ireo vehivavy tsy ampy taona tratran’izany fanolanana izany.
Efa mandray andraikitra mikasika ireo olana mpahazo ny vehivavy ny minisitera hoy Rtoa minisitra manolona ireo olana mpahazo ny vehivavy miaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka rehetra na eto an-toerana izany na ireo avy any ivelany. Nisaoran’ny ambasaodaoron’ny Afrikanina tatsimo moa ny Malagasy fiaraha-nitolona tamin’izy ireo, na dia tsy hiteny afa-tsy ny famoahana an’i Nelson Mandela tany am-ponja fotsiny ihany aza, izay lasa filoham-pirenen’io firenena io taty aoriana. Izay niarahantsika nahalala ny tohiny fa dia nijanona izy rehefa nahatsapa fa tsy hahavita intsony izany andraikitra izany. Tsy niandry nalana na koa hikorontana ny Firenena fa nametraka avo ny tombontsoan’ny Firenena. Eto am-pamaranana dia niaraka nankalazaina amin’ny fetim-pirenen’ny afrika atsimo ny andron’ny vehivavy afrikanina tatsimo.
Vehivavy Afrikanina tatsimo : Nomena andro manokana izy ireo - il y a 1 moi
Boky ho an’ny ankizy : Tena tafakatra 100 000 fa tsy angano - il y a 2 mois